Nhau - Chengetedza Mari Uye Kunetseka! Maitiro Ekugadzirisa Iyo Inonyanya Kukodzera Capsule cosmetic Bhegi?
Sevha Mari Uye Kunetseka! Maitiro Ekugadzirisa Iyo Inonyanya Kukodzera Capsule cosmetic Bhegi?
Chii chinonzi "capsule cosmetic bag"?
Izvo zvakafanana ne "capsule wardrobe" iyo munhu wese anowanzo daidza. Kunyangwe pasina zvinhu zvakawandisa muhombodo ino yekuzora, iine izvo "zvekutanga zvinhu" zvinodiwa pakuzora kwemazuva ese.
Uye izvo zvigadzirwa zviri pano zvinowirirana uye zvinoshanda zvigadzirwa, iwo anoenderana nemuvara haana kunyanyisa kuwedzeredza, kunyangwe zvikaenderana sei, hazvisi nyore "kutsika kutinhira".
Yakarongedzwa "capsule cosmetic bag" haigone kusiira maitiro ekusarudza zvigadzirwa panguva yekugadzira, inovandudza zvakanyanya kugona kwekugadzira, asi zvakare kuita kuti kufunga kwedu kusati kwanyatsojeka.
Ehezve, zvinokusevha mari kana ukasasarudza zvigadzirwa zvine zvakapetwa kana zvisina basa mabasa!
Bhegi rekuzora rakazara rinenge riine hwaro, penzura yeseri, eyeliner, mumvuri weziso, mascara, lipstick, blush uye contouring, izvi zvikamu zvisere zvezvigadzirwa zvinosanganisirwa.
Naizvozvo, ini ndinokurudzira mashoma mashoma ekushandisa zvigadzirwa zvechikamu chimwe nechimwe chezvigadzirwa. Iwe chete unofanirwa kusarudza iyo inokodzera iwe mune yega yega chikamu.
Mazwi akakosha: echisikigo, akajeka, uye anojekesa akazara ekugadzira maitiro
Sarudzo nzira: Iwo wepasi zvigadzirwa zvigadzirwa muchikamu ichi zvinonyanya kuumbika, uye iwe haudi chero akakosha ekugadzira matekiniki. Iwe unongoda kusarudza zvinoenderana nerudzi rweganda rako.
ps. Kana pasina chigadzirwa chinokodzera iwe, unogona zvakare kutsvaga zvigadzirwa zvemamwe mabara zvichibva pa "keywords".
Muchokwadi, kana iwe uchida kugadzira yakachena uye isina gadziriso mhedzisiro paganda risina kukwana, haudi hako matanho anorema-kusarudza hwaro hwemvura nesimba rakasimba rekuvanza uye kuwedzeredza inzira inoshanda zvakanyanya.
Mushure mekuparadzira zvakaenzana hwaro hwemvura, ine yakasarudzika "ganda rakachena" maitiro. Kunyangwe mukuru mukuru akati yakawoma uye yakasangana neganda rakaoma, hazvisi nyore kubvisa makeup mushure mekunge ganda rine mafuta riiswa.
Kune yakaenzana isina kukwana toni toni, dema madenderedzwa, acne mamaki uye mamwe madiki madiki, iyi hwaro inogona kuvhara nyore.
Ruvara rweiyi penzura tsiye zvine mwero grey, uye iyo yekuzadza yakaonda zvakakwana kuti itore nyore nyore zvisikwa uye zvakajeka "tsiye dzesango".
Zvichienzaniswa neyakare vhezheni yavo yakanangidzirwa tsiye yepenzura, iyi vhezheni itsva ye "Machete Eyebrow Penzura" ichave inochinjika mukushanda.
Zvakare, kudzoreredza kwepenzura resiye zvine mwero mukuoma, izvo zvinonyanya kukodzera kushandisa muromo wepeni kudhirowa "yakadzika midzi" mhedzisiro. Xiaobai haizove nechero yekumanikidza kushandisa!
Keywords: yakachena, yakajeka
Sarudzo nzira: Iyo yekutanga iyo inofarira kushama kushama yakwana; kana iwe uchida eyelashes yakareba uye inooneka, unogona kushandisa izvo zviviri pamwechete; vanopa vasingade kubvisa mascara isina mvura vanonyatsosarudza mascara.
Iko kunama kune micheka yakawanda inogona kurebesa eyelashes. Kunyangwe yakasviba nhema, iro ruvara rine imwe grey sikero, uye mhedzisiro yekupenda yakafanana neyakajairwa "eyelash essence".
Zvichienzaniswa neyakajairwa mascara, zvinoitika zveichi chigadzirwa zvakasarudzika, uye hazvisi nyore kufenda mukutevera. Inonyanya kukurudzirwa kune vashoma fairies vari nyore "maoko" pavanokwesha eyelashes avo!
Mazwi akakosha: kuzadza kwakanaka, mitsara yakatsetseka
Sarudzo nzira: Iyo mitsara yakadhonzwa neyemvura eyeliner peni yakapinza uye yakaomesesa, uye iyo gel eyeliner peni inokodzera zvakanyanya kune hanzvadzi dzinofarira mwenje makeup.
Kunyangwe mutengo wayo uchionekwa wakachipa pakati pezvinhu zvakachipa, unofananidzwa nezvigadzirwa zvinodhura maererano nekupa ruvara, kutsetseka kwemvura uye kuperera kweiyo nib.
Ose matema nebrown iwo akakodzera mumvuri ekugadzira zuva nezuva. Uye iro shava bhuru reiri iri rakareruka, saka nyangwe "iro rakaremara bato" rinogona kuridzora nyore ~
Mazwi akakosha: yepasi ruvara, zvine mwero kupa kara
Sarudzo nzira: Pamusoro pekupenda eyeshadow, iyo yakawanda-mavara phaleti inogona zvakare kushandiswa pakurwisa. Iyi inotevera 35-pendi pendi ine yakasarudzika sarudzo yemavara uye yakachipa.
Kana ndikangogona chete kusiya seti yemashizha patafura yekupfekedza, saka sarudzo yangu ichave yakanyanyisa uye panguva imwecheteyo "yepasi pevara".
Iri "diki bhururu bhuku" haringori chete rine mashoma matte browns ayo anogona kusimbisa pfungwa yehurukuro, asi zvakare ine yakajeka mivara ye grey uye isina-chena yekupenya.
Kupenya uye kuzadza kwemavara ekucheka pazasi ari munzvimbo yepakati, uye zvakare yakakosha kana ichishandiswa seyakatsvuka ~
Uye zvakare ine yakajeka yegoridhe bhuruu ine "pearl kuputika" dhizaini, iyo inotaridzika yakangwara kwazvo mushure mekushongedza maziso, uye iwe unogona kupenda yakanaka maziso ekugadzira ane akajeka matete uye akajeka mavara.
Sarudzo nzira: Iyo yakasviba lipstick iri kunyorova zvishoma, uye ivo fairies vanofarira nyoro mhute vanogona kusarudza miromo matope.
Hazvina musoro kuti uyu lipstick inogona kuve inozivikanwa kwenguva refu-nekuti iri ruvara nderwechisikirwo uye hunhu ~
Pakutanga kuona, ruvara rwayo runodziya uye rwakashama, asi mushure mekuisa pamuromo, hazvizove zvakaoma kudzora seyakajairwa "inodya ivhu ivhu". Pane zvinopesana, zvinogona zvakasikwa kusimudzira kunoteura kweropa kwemiromo.
Iyo cream yakasviba ine imwe yekuvhara simba kuseri kwemuromo, uye hapana chikonzero chekuwedzera primer yekudzika kwemuromo miromo ~
Hunhu hwacho ndewekuti iwo maratidziro acho anotsvedzerera, ayo asingori chete anochengetedza matte uye echando akapfava uye ane hunyanzvi ekugadzira mhedzisiro yemuromo wedhaka pachayo, asi zvakare inodzivirira iyo yakaoma kunzwa inokonzerwa nekuoma.
Uku kutsvuka kune kubwinya kwakapfava uye kunochinjika uye kwete kwekusarudza. Ndiyo nhamba nyowani yerudzi mune yavo monochromatic blush. Ruvara rwepingi peach rinotaridzika kutapira uye mhepo, uye zvakare rakafanana neyakajairika nyika vara ziso kugadzira. Akanaka kwazvo machisi.
Pamusoro peiyi-yega-blush blush, mazhinji makuru-zita rimwe chete-ruvara blushes zvakare inokurudzirwa kwazvo.
Mazwi akakosha: yakajeka ruvara, kusanganisira akasiyana toni
Kunyangwe nhanho dzekuchekerera nekusimbisa dziri nyore, mutsauko uripakati pekushandisa uye usingashandisi wakanyanya kunyanyisa!
Zviri nyore kushandisa iyi "yakakwira-kubwinya kudhonza zvese-mu-kamwe dhisiki", uye inonyatsosiya danho re "kuunganidza disc" mune rimwe chete vara.
Asi iyo yakazara ruvara rweplate iyi yakareruka, uye musiyano uripo pakati pechiedza nerima hauna kusimba zvakanyanya. Kana iwe uine rakasviba ganda toni, iwe unogona zvakare kutsvaga mamwe mahwendefa zvinoenderana nepfungwa yechigadzirwa ichi.
Post nguva: Aug-10-2021
Ziso Lashes, lipgloss, Eyelash Kuwedzeredzwa, Vatengesi ve Eyelash, eyeliner, mink lashes,